China i-keybox-48 Hot Sales Security Key Holder Cabinet ifektri kanye nabaphakeli | Landwell
Ukuphepha kokhiye bakho
Vikela okhiye bakho njengoba belawula ukufinyelela ezindaweni ezibucayi nezinto zenani eliphezulu. Lapho okhiye bephathwa kangcono, izimpahla zakho zizophepha kakhulu kunakuqala.
Ishidi Steel & Amandla Camera
Umnyango we-Acryic / Metal
Ububanzi be-KeyTag Ring
I-KeyTag Ring Izinto
Imvamisa Yokufunda Ikhadi
125 Khz / 13.56 Mhz (Uyazikhethela)
9999 Keytags & 1000 Abasebenzisi
Uhlobo lwe-Windows XP noma ngaphezulu
Uhlobo lwe-SQL Server 2012 noma ngaphezulu
Kuyindlela yokuphatha ehlakaniphile enobuchwepheshe besimanje ukuhlela okhiye bansuku zonke nezinto eziyigugu. Ungakwazi ukulandela ngomkhondo isimo sokhiye ngamunye ukuze zonke izinkinobho zilawulwe ngokukhalipha. Kuyindlela enhle yokukusiza ukuxazulula izinkinga eziyinhloko zokuphatha. Kusukela kokukhethwa kukho okulula okuvikelwe kokulawulwa kwezinga lebhizinisi lamadivayisi abizayo noma abucayi, inikeza indlela enembile nenamandla yokuphatha, ukulandelela nokubika ukusetshenziswa kwempahla ebaluleke kakhulu.
ibhokisi lokhiye i-48
Iphasiwedi, ikhadi le-RFID, ukubonwa kobuso
I-CE, i-FCC, i-ISO9001, i-BV, i-TUV
Inombolo Yesikhiye Sokhiye
Imvamisa Yethegi Ekhiye
1.Access ngephasiwedi, zeminwe, futhi RFID ukufinyelela ikhadi kulula ukuthatha futhi abuyisele okhiye.
2. Ukuphathwa kokugunyazwa futhi kukhiqize ngokuzenzakalela amarekhodi okulandwa, kunciphise ubungozi nezindleko zokuphatha, kuthuthukise ukusebenza kahle komsebenzi.
3. Ingilazi ye-PMMA noma umnyango wensimbi ongagqwali ukwenza okhiye baphephe.
4. Izinkinobho zilawulwa nge-hardware ne-software, zisebenza kalula.
5. Kuhlanganiswe nohlelo lokulawula ukufinyelela okuningi.
6.Thola i-CPU ezimele neFlash, ukwakhiwa kwamabhasi asuselwa ekwakhiweni, ukubukeka okuhle futhi usebenzise isikhala esincane.
Abantu abangenayo imvume abakwazi ukufinyelela ukhiye.
Ukhiye ngamunye kungumsebenzi womsebenzisi ogunyaziwe kuphela.
Lokhu kusho ukulahleka kokhiye okuncane nokulahleka kwempahla ngengozi.
Abasebenzisi abagunyaziwe bangabuyisa futhi bathathe okhiye nganoma yisiphi isikhathi, okusho ukuthi izindleko zabasebenzi ezingaphansi nokuncika okuphansi. Ngokuhlola umlando wokufinyelela, ungaqedela kalula ukuphathwa kokhiye.
Uhlelo luqopha ngokuzenzakalela ukusetshenziswa kokhiye ngesikhathi sangempela, lunikeze amarekhodi okufinyelela nemibiko. Ngokuhlola umlando wokufinyelela, ungahlala uthola imininingwane yakamuva.
Uhlelo luhambisana futhi lungahlanganiswa nokulawulwa kokufinyelela kwenkampani, ukuqapha, ukubakhona, i-ERP nezinye izinhlelo ukufeza ukuxhumana kwenethiwekhi.
Ukuphathwa kwesilawuli kude
Ungakwazi ukumisa kalula okhiye nge-software yohlelo bese usetha ukude imvume yabasebenzisi. Ukulawulwa kwe-inthanethi nemibuzo kusiza ekwehliseni izindleko futhi kukhuphule ukufinyeleleka.
Uhlelo lwe-Landwell Key Management System lungajwayelekile noma lwenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukile. Imodyuli yokhiye nemodyuli yesitoreji ingahlanganiswa ohlelweni olulodwa.
I-L / W / H (mm)
i-Ibhokisi elingukhiye 64
i-Ibhokisi elingukhiye 200
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla Ikhabethe Key Lockable Key - IKhabhinethi Yesitoreji Esibalulekile - Landwell
Olandelayo: IKhabhinethi yokuphepha yedivayisi ye-H3000 ye-H3000
Ukubethela Ukhiye Management System
Uhlelo Lokuphathwa Kokhiye weFleet, Izinhlelo Zokhiye Wokuphathwa Kwezakhiwo, Uhlelo Lokulawulwa Kokhiye Wezimoto
Ihhovisi & Ihhotela Self Izikhungo Keys Machine w ...
Landwell ohlakaniphile ibhokisi ukhiye ukuphepha phezulu manag ...
IKhabhinethi Ekhiyekayo, IKhabhinethi Yokuphatha Okusemqoka, Small Box Management System Futhi Key, IKhabhinethi Yesitoreji Esikhulu Esikhulu, Ibhokisi Lokulawula Ukhiye, Ulenga Key Box,